Ny piozila momba ny fitantanana data data | Martech Zone
Ny krizy momba ny mombamomba ny mpanjifa
Amin'ny angano hindoa, Rahavana, ilay manam-pahaizana lehibe, ary mpanjaka demonia, dia manana loha folo, maneho ny heriny sy ny fahalalany samihafa. Ireo lohan-doha dia tsy azo simbaina tamin'ny fahaizany mamoritra sy miverina mamerina. Tamin'ny adin'izy ireo, Rama, andriamanitra mpiady, dia tokony hidina ambanin'ny lohan'i Rahavana ary hikendry ny zana-tsipìka hamono azy ho soa.
Amin'izao vanim-potoana maoderina izao, ny mpanjifa dia mitovy amin'ny an'i Rahavana, tsy amin'ny endriny ratsy fa ny mombamomba azy marobe. Ny fikarohana dia milaza fa ny mpanjifa antonony any Etazonia ankehitriny dia mifandray amin'ny fitaovana 3.64 Miaraka amin'ny fiparitahan'ny karazan-java-baovao toa ny mpandaha-teny marani-tsaina, fitaovana azo ampiasaina, trano mifandraika, ary fiara sns., Vinavinaina fa afaka mifandray izy fitaovana 20 eo ho eo tsy ho ela. Tahaka ny nataon'i Rama, ity dia mametraka fanamby mazava ho an'ny mpivarotra ankehitriny - ny fomba hamakivakiana ny maze an'ireo fitaovana ireo hahafantarana sy hahafantarana ny mpanjifa mba hahafahany mifangaro, tsy tapaka ary mifototra amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny ivoahany.
Ny fikarohana momba ny indostria dia manolo-kevitra fa ny ampahany kely amin'ny orinasan-mpanjifa ihany no afaka mamantatra tsara ny mpihaino azy ireo ankehitriny - noho izany ny fahatongavan'ireo vahaolana amin'ny fitantanana Identity izay manampy ny orinasa hamaha ny mombamomba ny mpihaino azy ho lasa mombamomba ny mpanjifa tsirairay. Ny haben'ny tsenan'ny vahaolana Identity dia tombanana hitombo hatramin'ny $ 900 Mn amin'izao fotoana izao ka hatramin'ny $ 2.6 Bn amin'ny 2022, mihoatra ny fitomboan'ny fampiasam-bola amin'ny marketing amin'ny ankapobeny.
A recent Fanadihadiana momba ny Winterberry dia manondro fa 50% eo ho eo ny orinasan'ny mpanjifa no nanamafy ny fifantohana sy ny drafitra hampiakarana ny fampiasam-bola amin'ny vahaolana Identity. Na dia ny fizarana sy ny kendrena amin'ny haino aman-jery aza dia mijanona ho tranga fampiasa matetika amin'ny marika mpanjifa, ny cross-device sy ny personalization amin'ny fantsona miampy ny fandrefesana ary ny fanondroana dia antenaina ho lasa faritra ifantohana atsy ho atsy.
Famahana vahaolana: Ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy
Amin'ny maha-fotony azy, ny vahaolana vahaolana amin'ny famahana ny maha-izy azy dia ny manangona tsy tapaka ny angon-drakitra asan'ny mpihaino avy amina loharanom-pahalalana, sehatra ary serivisy tsy mitovy mba hananana ny mombamomba ny mpiray vondrona tsirairay. Na izany aza, ny fomba fiasa dia nanjary hadalana hatreto tamin'ny alalàn'ny marketing sy ny paikadim-pahalalana manokana. Ny tahiry CRM amin'ny maha-mpiambina ny mpanjifa antoko voalohany sy ny fampahalalana momba ny fifandraisana dia ny sehatra fampahalalana mahazatra ho an'ny fampihetseham-barotra mivantana, amin'ny alàlan'ny mailaka na mailaka mivantana.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fandaniana nomerika marketing, Sehatra fitantanana data (DMPs) izay mitahiry tahirin-kevitra momba ny fitondran-tena ho an'ny mpijery nomerika hanohanana indrindra ny tranga fampiasana fividianana doka dia nanjary nalaza. Na izany aza, mampametra-panontaniana ankehitriny ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo zaridaina misy rindrina toy ny Facebook sy Google manidy varavarana azy ireo. Ny fantsom-pamokarana mitombo hafa dia ny sehatra angon-drakitra finday hanohanana ny fifandraisan'ny fitaovana finday sy ny toerana misy azy.
Mba hihoarana ny fetran'ny fantsona tsy mifandray, fantsona maro izay vahaolana amin'ny Identity ankehitriny toa ny angona CRM na DMP no terena, ny fifantohana dia miova amin'ireo vahaolana maoderina miseho toa ny Sehatra ho an'ny mpanjifa (CDP) sy sary famantarana. Ireo dia manolotra fomba iray mitambatra, cross-touchpoint ary omni-channel mankany amin'ny famahana ny maha-izy azy sy ny fampifandraisana, ahafahana mahita fomba fijery mirindra sy tokana an'ny mpanjifa amin'ny mpivarotra.
Sary I. Ny fitantanana ny mombamomba ny mpanjifa no lakilen'ny marketing ara-nofo
Ny mekanika famahana fanapahan-kevitra
Ny asan'ny rafitry ny famaritana ny tena dia ny manangona tahirin-kevitra mifandraika amin'ny mpihaino avy amina loharano isan-karazany ary mametraka izany amin'ny alàlan'ny dingana mitohy izay mamaha, mamorona ary manavao ity data ity ho lasa mombamomba ny mpanjifa, izay ampiasain'ny orinasa amin'ny endrika marketing isan-karazany na activations hafa.
Ny dingana dia ahitana dingana telo lehibe:
Data fitantanana - Ahitana ny fihinana ny tahirin-kevitry ny mpanjifa tsy mitovy, na ny mombamomba azy na ny hetsika mifandraika amin'izany, arahin'ny fanodinana sy fitahirizana ireo angon-drakitra ireo ho any amin'ireo trano fitahirizana voarindra.
Famahana fanapahan-kevitra - Ity dia fifangaroana sarotra sy sarotra amin'ny fizotran'ny famaritana sy ny probabilistika hahazoana mari-panondroana, fampitahana, fifampiresahana ary fampifandraisana amin'ireo mombamomba ny mpanjifa arahin'ny mekanisma fanamarinana mba hampitomboana ny maha-marina ny fizotrany.
Taranaka mombamomba ny mpanjifa - Izy io dia mampifandray ny mpampahalala, ny toetra ary ny hetsika rehetra ao anaty kisarisary momba ny maha-izy azy, ny olona iray na ny ankohonana iray.
Inona no mahatonga ny vahaolana fitantanana mombamomba mahomby: Mantra 5
Hamarino tsara fa ny rafitry ny Identity dia omena data avy amina loharanom-pahalalana marobe. Tsy ny hetsika ataon'ny fitaovana ihany fa ny fampiharana any aoriany mba hanampiana amin'ny fandavahana ilay fitaovana, cookie na pixel ary hanehoana ny tena olona ao ambadik'izy ireo sy ny fihetsik'izy ireo.
Ao anatin'ny fitantanana angon-drakitra, alao antoka fa mahafeno ny zon'ny tsiambaratelo momba ny mpanjifa sy ny fepetra takiana amin'ny fenitra indostrialy toa ny GDPR, CCPA sns.
Ny famahana ny maha-izy azy dia tokony ahitana fizotran'ny lalao famaritana deterministika mifototra amin'ny fitsipika mba hahazoana antoka fa avo lenta ny fitsikilovana hanohanana ny fifandraisan-davitra sy ny tena manokana amin'ny raharaha fampiasana marketing mivantana
Ny fizotran'ny famaritana dia tsy maintsy ampiana amin'ny alàlan'ny fianarana milina entina mampifanaraka probabilistic hanitatra ny angon-drakitra, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tranga fampiasana toy ny media sosialy na fampiratiana dokam-barotra izay manantena harato midadasika kokoa nefa kely kokoa 1: 1
Ny mombamomba ny mpanjifa novokarina, amin'ny endrika kisary Identity, na dia manana ny maha-izy azy azy sy ny fahaizany mandanjalanja aza dia tokony hihoatra ny fifandraisana amin'ireo mpampahalala sy toetra mampiavaka azy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo hevi-baovao tadiavina mba hahafahana manatsara ny tranga fampiasana ny fampidirana marketing.
Tags: ccpacdpfitantanana ny mombamomba ny mpanjifaSehatra ho an'ny mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifasehatra fitantanana datasehatra fitantanana datadmpecommercemailakamailaka idgdprmaha-Kisary famantaranafamahana ny maha-izy azyvahaolana momba ny maha-izy azytsy fivadihanafinday fampiharanapersonalizationnomeraon-telefaonatoerana amidySMS
Sameer dia niaraka tamin'i Manthan efa ho 7 taona nitantanana ny fitantanana ny vokatra ho an'ny tsipika vokatra marobe. Amin'ity andraikitra ity dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fiainam-piainan'ny vokatra feno izy hatramin'ny fananahana, fampandrosoana hatramin'ny fananganana. Amin'ny ankapobeny, i Sameer dia manana traikefa 20+ taona manokana amin'ny fanomezana vahaolana fangatahana fandraharahana tarihan'ny haitao ho an'ny orinasa lehibe. Izy koa dia manana traikefa manan-danja amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasan-teknolojia akany / fanombohana amin'ny fananana mpikambana ao amin'ny ekipa mpiorina voalohany.
Torohevitra 10 momba ny paikady fandresena mandresy